Amabhuloho | RayHaber
Kwakhiwa amabhuloho aphephile eBalıkesir emaphandleni; Amabhuloho aseHungarians-Karamanlar neNusret-Kepsut, asengozini enkulu yokusebenzisa, acekelwa phansi nguMasipala waseBalıkesir Metropolitan futhi akhiwa kabusha njengomzila ophephile nambili. Ithrafikhi [Okuningi ...]
Ngenxa yesiqinisekiso esinikezwe inkampani esebenzayo e-Osmangazi Bridge, iphakethe lomuntu odlulayo lishisiwe. UCahit Turhan, onguNgqongqoshe Wezokuvakasha kanye Nezingqalasizinda, uyakhokha njengamanje [Okuningi ...]
Umklomelo Wokufinyeleleka Komhlaba Wonke we-IRF oya kuYavuz Sultan Selim Bridge; I-Yavuz Sultan Selim Bridge, enezimiso eziningi ezingabhekwa njengezigameko ezibalulekile ngokomlando wobunjiniyela bomhlaba, ihlelwe yi-International Road Federation (IRF). [Okuningi ...]
Impumelelo Yomklomelo Wamazwe Ngamazwe kuma-Giant Projects; UCahit Turhan, onguNgqongqoshe Wezokuvakasha kanye Nezingqalasizinda, usezuze amafayili amaningi ukusuka esigabeni sokuklama kuze kube manje nge-Eurasia Tunnel, ethathwa njengenye yamaphrojekthi wobunjiniyela aphumelela kakhulu emhlabeni. [Okuningi ...]
Ukushintshwa Kwentengo Yomgwaqo Ophezulu no-Bridge; Ngohlobo “lwamanani ashukumisayo” olungiselelwe nguMnyango Wezokuthutha kanye Nezingqalasizinda ukuba lidlule emigwaqweni emikhulu namabhuloho, izakhamizi zizosebenzisa imigwaqo ekhokhayo eshibhile ngezinye izinsuku namahora. Ukuqina kwesidingo [Okuningi ...]
I-Kadikoy Ibrahimaga Bridge Iyawa! Umgwaqo i-5 Moon Pedestrian; UMasipala wase-Istanbul Metropolitan uqala umsebenzi wokubhidliza impahla ngaphakathi kokuvuselelwa kwe-Ibrahimaga Bridge eKadikoy. Ukulungiswa kabusha kwe-Ibrahimaga Bridge kuzothatha izinyanga ukuya ku-5. Isifunda sase-İstanbul Kadıköy [Okuningi ...]
Ukwanda okungapheli kwamanani kaphethiloli kuqondisa abasebenzisi kwezinye izinto ezisebenzayo. Izimoto ezinobungani bemvelo nezonga izindleko nge-LPG Ngokusho kwedatha ye-TURKSTAT ye2019, i-37 yakha iphesenti lezimoto. Abashayeli abaningi njalo ngonyaka [Okuningi ...]
Umnotho eTurkey isibe kwebhuloho bomkhumbi Ufaka futhi engenayo lisuselwa isikhathi Januwari-Septhemba kwaba 1 bhiliyoni onguthelawayeka kwezigidi ezingu 434 504 391 ayizinkulungwane amakhilogremu. Ngokusho kwedatha yeDirector Directorate of Highways, 15 e-Istanbul [Okuningi ...]
Amabhuloho kuPhororouk Stream, engeza ubuhle ebuhleni buka-Eskişehir, umsebenzi wokulungisa nokulungisa uMasipala Metropolitan uyaqhubeka. Ukulungiswa kwamabhuloho, okungenye yezimpawu zika-Eskişehir, kuqale ngonyaka ophelile futhi kuyaqhubeka kulo nyaka. kwepaki [Okuningi ...]
I-General Directorate of Highways (KGM), namhlanje (i-7 Okthoba) ukuthi isebenze kahle njengoba iphesenti lomgwaqo omkhulu kanye nama-toll Bridge ememezele ukuthi amaphesenti aphakathi nokwenyuka kwe-20. Ama-motorway kanye nama-toll toll avumelekile kusuka ngo-Okthoba kuya ku-7 [Okuningi ...]
IMeya kaMasipala we-Ordu Metropolitan UMehmet Hilmi Guler, umgwaqo osogwini lweBlack Sea ebhulohweni wakha enye indlela ngeMelet Bridge wenza uphenyo. Kusendaweni yomgwaqo omkhulu we-Black Sea Coast yizinyathelo zikaMasipala wase-Ordu Metropolitan [Okuningi ...]
Umbusi wase-Çanakkale u-Orhan Tavlı, umlando we-18 Mashi 2017 owabekwa nguMongameli Recep Tayyip Erdoğan 1915 Çanakkale Bridge, indawo yokwakha yahlolwa. Abahloli Abakhulu Bezezakhiwo Naci Çetin Akder no-Ali Alper [Okuningi ...]
UMasipala waseKocaeli Metropolitan, obona ukubaluleka kwamaphrojekthi wokuhamba ezikhungweni zedolobha, uyaqhubeka nokusebenza kumaphrojekthi azothuthukisa ukuthuthwa kwezakhamizi ezihlala ezindaweni ezingaphandle kwesikhungo. Ngakho-ke, isiFunda iKörfez Çıraklı Quarter kanye neDerince District Çavuşlu [Okuningi ...]
Iphini le-CHP Istanbul uMhlonishwa u-Adıgüzel, Isikhungo Sokuxhumana SikaMongameli (CIMER) uYavuz Sultan Selim Bridge kwisicelo esivela emphakathini sabelane ngempendulo evela kwisicelo. Ngokusho imininingwane etholwe Adıgüzel YSS Bridge avareji nsuku zonke 1 million [Okuningi ...]
Isimangalo sokulimala eBosphorus Bridge Ngemuva kokuzamazama komhlaba e-Istanbul
Umongameli we-İBB u-Ekrem İmamoğlu, ukuzamazama komhlaba okusekwe yi-Silivri ngemuva kobukhulu be-5.8 AKOM'a kudlule. U-Imamoglu, ofisa ukwedlula izakhamizi zase-Istanbul kanye namadolobha aseduze, uthe ukuzamazama komhlaba yisixwayiso. Ukuzamazama komhlaba, [Okuningi ...]